यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुन थाले किन ? - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुन थाले किन ?
Published On : १२ बैशाख २०७५, बुधबार १८:४०
काठमाडौं । सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार तोडेपछि संघ तथा समितिहरु खारेज हुने प्रक्रियामा छन् । संघ, समिति खारेज हुने भएपछि यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराउने क्रम बढेको छ ।
सरकारले गत चैत १८ गते जारी गरेको यातायात क्षेत्रको नयाँ निर्देशिकामा संघ, समितिमा रहेका सवारीसाधनलाई कम्पनी रजिष्ट्रार ऐनअनुसार अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरका अनुसार चैत १८ पछि करिब १ हजार यातायात कम्पनीहरु दर्ताको प्रक्रियामा रहेका छन् । संघ, समिति खारेज गरी कम्पनी रजिष्ट्रारमा यही वैशाखमा मात्र ९ वटा यातायात कम्पनी दर्ता भइसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र थापाले बताए । थापाका अनुसार वैशाखअघि सम्म ६ सय ४० वटा यातायात कम्पनी दर्ता भइसकेका र थप दर्ता हुने प्रक्रियामा छन् । वैशाख १० गते मात्रै १६ कम्पनीको नाम स्वीकृत भइसकेको छ भने १४ कम्पनीको नाम भेरिफाइ हुने क्रममा छ ।